Job Search Skills Career Advice
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင် တစ်ခု လုပ်ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ အစီအစဉ်က ဘယ်လိုလဲ?
ချန်ပီယံတစ်ဦးမှာ ပြိုင်ပွဲအတွက် အောင်မြင်အောင် ဘယ်လို ကစားမယ်ဆိုတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေရှိပါတယ်။ ဒီနည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ သင့်အတွက် Wynee ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။
(၁) သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ပါ။
သင်ရဲ့ပန်းတိုင် ကို သင့်ဟာ သေးငယ်တဲ့ ခြေလှမ်းလေး တွေ အဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်က ငွေကြေးစီမံ ခန့်ခွဲရေးအပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကိုင်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားထားရပါမည်။ ဒီနယ်ပယ်ထဲက နာမည်ရအထင်ကရ လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကို စတင်လေ့လာဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
(၂)အဓိကလိုအပ်မယ့် အရည်အချင်းတွေကို စဉ်းစားပါ။
လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ သူတို့တန်ဖိုးထားလိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် Microsoft Excel ကို ကျွမ်းကျင်အောင် သုံးတတ်ရမယ် ပြီးတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ Analytical Skill ဆိုတဲ့သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရည် ရှိရမယ်။ ဒီအရည်အချင်းတွေကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ပါ။
A champion always hasastrategy to win the competition. Start with these tips from Wynee.
(1) PICK YOUR GOAL
Come up withaseries of checkpoints. To kick-startacareer in the finance industry, your first step would be to understand the operations of the finance industry. Begin by reading the ‘about us’ sections of big players in the industry.
(2) IDENTIFY THE KEY REQUIRED SKILLS
Certain industries value employees ofaspecific skill set. For example, the finance industry may prefer candidates with Microsoft Excel skills and display analytical ability. Build up these skills and you are geared towards your dream job.
What are my career options in finance? (Part 1 of 3)